AMATSHA-NTLIZIYO olwakhiwo elizwe nawamanye amazwe asebenza nzima unyaka onesiqingatha ukuze kwandiswe kuze kulungiswe isebe laseBishkek, idolophu elikhomkhulu laseKyrgyzstan. Eli sebe lanikezelwa ngoOktoba 24, 2015, emva kwenyanga nje lo msebenzi ugqityiwe. Kwakukho abantu abangaphezu kwe-3 000 ababekwiiHolo zoBukumani eziyi-18 nakwezinye indawo ezintlanu. Intetho yokunikezela elo sebe yanikelwa nguStephen Lett weQumrhu eliLawulayo, eyayinomxholo othi “Mkhonze UYehova Ngentliziyo Epheleleyo.” Ngosuku olulandelayo, kwabakho intlanganiso eyomeleza ukholo lwabavakalisi abaninzi belo lizwe.
NgoMeyi 14, 2016, kwakukho abantu abayi-6 435 xa kwakunikezelwa iofisi yesebe laseArmenia, lona elikwimigangatho emithandathu kwisakhiwo sokuhlala esihle esinemigangatho eyi-18. Kwanikezelwa neHolo YeNdibano kunye nendawo yeSikolo Sabavangeli BoBukumkani. Ezinye zeentetho zachaza imbali yabakhonzi bakaYehova baseArmenia. Inyaniso yafunyanwa okokuqala ngabantu baseArmenia ababesebenza eMerika phaya ekuqaleni kwenkulungwane ye-20, yaza kamva yafika naseArmenia uqobo phakathi koo-1970, xa kanye eli lizwe laliseyinxalenye yamazwe eSoviet Union. Kutshanje, intlangano iye yabhaliswa ngokusemthethweni kwaza kwasekwa isebe. Abaninzi ababelapho bavuya kakhulu kuba zange bacinga ukuba ezi zinto ziya kuze zenzeke. Eyona mbalasane yolo suku kuxa uDavid Splane weQumrhu EliLawulayo wanikezela ezo zakhiwo kuYehova.
Ekuqaleni: Ucwangciso lokunikezelwa kwesebe laseArmenia
Embindini: Abazalwana noodade baphulaphule iintetho zempelaveki ekhethekileyo
Ezantsi: Umdaniso wesintu waseArmenia ebusuku